Fandefasana rindrambaiko mafy orina - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ny injeniera Fumax dia hampiditra ny Firmware ho an'ny mpanjifa (matetika HEX na BIN FILE) mankany amin'ny MCU hahafahan'ny vokatra miasa.
Fumax dia manana fifehezana henjana amin'ny programa firmware
Ny fandaharan'asan'ny IC dia ny manoratra ny programa amin'ny toerana fitahirizan'ilay chip amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny programa, izay amin'ny ankapobeny dia mizara ho fandaharana ivelan'ny Internet sy fandaharana an-tserasera.
1. Ny ankamaroan'ny fomba fanaovana programa
(1) Programmer manerantany
(2) Programmer natokana
(3) Fandaharana an-tserasera ：
2. Endri-javatra amin'ny fandaharana amin'ny Internet：
(1) Ny fandaharana an-tserasera dia mampiasa bus fitaterana mahazatra an'ny chip, toy ny USB, SWD, JTAG, UART, sns. Ny interface dia matetika raikitra ary vitsy kokoa ny tsimatra mifandray amin'ny fandaharana.
(2) Satria ny haavon'ny fifandraisana dia tsy avo, ny tariby ankapobeny dia azo ampiasaina amin'ny firaketana tsy misy fanjifana angovo avo.
(3) Satria ny fandoroana amin'ny Internet dia voarindra amin'ny alàlan'ny fifandraisana misy tariby, raha misy lesoka hita mandritra ny fitsapana ny famokarana, ny PCBA diso dia azo zahana ary hodorana indray nefa tsy esorina ilay puce. Tsy mamonjy ny vidin'ny famokarana fotsiny izany fa manatsara ny fahombiazan'ny fandaharana.
3. Inona no atao hoe programmer?
PROGRAMMER, fantatra ihany koa amin'ny maha mpanoratra na mpandoro azy, dia ampiasaina handrindrana programa programable IC.
4. Ny tombony an'ny programmer IC
Ho an'ny ankamaroan'ny IC teo aloha dia tsy iraisan'ny besinimaro izy ireo, fa amin'ny fampiasana manokana, miantso ireo karatra DEDICATED.
Ka raha te-hamolavola takelaka boribory ny mpamorona dia tsy maintsy mampiasa karazana IC isan-karazany miaraka amina asany raikitra izy ireo ary mila manomana karazana IC isan-karazany, indrindra ho an'ireo mpanamboatra lehibe.
Ankehitriny ny mpamorona dia mila manomana IC fotsiny handoro azy ho IC miaraka amina asa hafa aorinan'ny namoronana sy nampiasaina ireo ID DEDICATED.
Mety ny fanomanana, fa tsy maintsy omena burner handoro azy.
5. Ny fahafahantsika:
Fitaovana rindrambaiko: Altium (Protel), PADS, Allegro, Eagle
Fandaharana: C, C ++, VB